အသက် ၂၀ - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် PIED ဖြစ်ဖူးခြင်း - Brain On Porn
အသက် ၂၀ - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် PIED ရှိခြင်း
[အကြံပေးချက်] ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ လည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါကပိုပြီးလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့မင်းရဲ့ဘဝဟာပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ အစပိုင်းမှာတော့မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အခက်အခဲကမင်းကိုပိုပြီးအားကောင်းစေပြီးခရီးကိုထိုက်တန်ပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိကပ်ပါ။ သင်တစ် ဦး တိုက်တွန်းခံစားရလျှင် "ဒီနေ့မဟုတ်" ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြပါ။ သင့် ဦး နှောက်လိုချင်တာကိုငြင်းဆိုဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်ရပါမယ်။ အိပ်စက်ခြင်းအနေဖြင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင်တစ်ညလုံးမနေပါနှင့်။ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ၊ ဒါငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တာပဲ အကယ်၍ သင်ကတွန်းအားတစ်ခုနဲ့နိုးထလျှင်ရေအေးတစ်ပုလင်းသောက်ပါသို့မဟုတ် pushups အချို့ပြုလုပ်ပါကသင်ထုတ်လွှတ်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်သည်။
ကြီးမားတဲ့အစွန်အဖျားဦးနှောက်နှင့် reboot လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ဘာညစ်ညမ်းသုတေသနရန်ဖြစ်ပါသည်။ စတင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခု YourBrainOnPorn ဖြစ်ပါတယ်။
NoFap ကိုသင်ကအခွင့်အလမ်းပေးမယ်ဆိုရင်သာအထွက်နှုန်းရလဒ်များကိုမည်။ အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိ IS, ငါ့ကိုကနေယူပါ။
PS: pied, လူမှုရေးအရစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုများနှင့် nofap တော်တော်များများလေ့ကျင့်ခန်း၏အကူအညီဖြင့်ငါ့ကိုကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
"ပြောင်းလဲမှု၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမဟောင်းတိုက်ခိုက်နေအပေါ်ပေမယ့်သစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အားလုံးအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ " - ဆိုကရေးတီး
လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က NoFap ကိုစတင်ခဲ့တုန်းကဘယ်လောက်အထိခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ဘူး။ ငါ့ PMO စွဲလမ်းမှုကြောင့်ငါမကောင်းတဲ့အရပ်သို့ရတယ်။ တစ်ကယ့်ကိုဆိုးရွားရာအရပ်။ အပတ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ငါ့စိတ်တွေကငါ့ရဲ့တွန်းအားတွေကိုလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တယ်။ ဤအရာသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ပုံရသည်။ ယင်းကြောင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများ၊ ဦး နှောက်မြူမှုန်ခြင်း (ရှုပ်ထွေးမှု၊ သတိထားမှုနည်းပါးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းညံ့ဖျင်းခြင်း) နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမရှိခြင်းတို့ကို ဦး တည်စေသည်။
PMO ပတ်သက်. အရာကြောင်း၎င်း၏တစ်ဦးအာရုံသည်, သငျသညျကနေရမြင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ခြင်းမရှိဘဲ, အမြဲသင်ကိုယ်တိုင်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်နောက်ကွယ်မှ PMO ထွက်ခွာ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားအဖြစ်ရင်ဆိုင်ရဖို့ညှိနှိုင်းမှုကာလရှိရလိမ့်မည်။ သင်အဆုံးအပေါ်နှစ်ပေါင်း porn ကို အသုံးပြု. ပြီအထူးသဖြင့်လျှင်, လွယ်ကူသောဖြစ်လိမ့်မည်စဉ်းစားသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရူးဘယ်တော့မှမ။ အမှုအရာစိန်ခေါ်မှုရသောအခါမူကား NoFap ဝေးရှက်ကြဘူး။ အမှုအရာအများစုကိုဆက်ဆက်စိန်ခေါ်မှုရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အစဉ်အမြဲသတိရ: အီတိုးတက်မှုနှုန်း begets ။
"ငါသည်သူ၏ရန်သူများကိုအောင်နိုင်သူအဘယ်သူသည်သူ့ကိုထက်မိမိအလိုဆန္ဒများကိုအောင်မြင်သောသူကို braver သူ့ကိုရေတွက်; အခက်ခဲဆုံးအောင်ပွဲများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုကျော်။ " - အရစ္စတိုတယ်
ကြီးမြတ်သောသင်တို့ဆီသို့လမ်းကြောင်းမျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌မတွေ့ရှိသည်ကအတွင်းတွေ့ရှိရသည်။ သင်တို့နေရာ Accept; သင်တို့နေရာများအတွက်တာဝန် ယူ. , ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပျက်ပါစေ။ တစ်ကြိမ်မှာသေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်း။ ဤသည်ကအရေးကြီးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှေ့မထားပါနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်သေးငယ်သည့်အဆင့်များဖြင့်သင်သည်အမြဲတမ်းရှေ့သို့ရွေ့နေသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရပ်တန့်ရန်ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနှင့်၊ နေ့အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအမြဲရှာပါ။ ၎င်းကိုနည်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤတွင်ကျွန်ုပ်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများကကျွန်ုပ်အားအလုပ်များနေစေရုံသာမကတစ်နေ့တာနှင့်အစဉ်မပြတ်တိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုထားသောအရာများဖြစ်သည်။
သင့်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ပိုင် အခြားအရာအားလုံးမတိုင်မှီ၊ သက်ရှိစွမ်းအားအပေါ် NoFap သို့သင်မည်မျှရောက်သွားသနည်း။ ငါတို့အများစုဟာရှိတယ်လို့ပြောဖို့ဝေးသွားတယ်။ Willpower သည်၎င်း၏ကြွက်သားနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုပြီးနောက်အားနည်းလာပြီးပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်သည်။ willpower ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါအဘယ်အရာကျန်သနည်း စည်းကမ်း။ စည်းကမ်းကသင့်ကိုဆက်မလုပ်ချင်ရင်တောင်ဆက်လုပ်သွားမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် NoFap ကိုဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့အုတ်မြစ်မရှိရင်၊ မင်းကအကြောင်းပြချက်တွေကိုပိုရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ၎င်းအားလုံးကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ရေးချပါ၊ အကြိမ်ပေါင်းအများဆုံးစမ်းသပ်မှုများ၌၎င်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာထားပါ။ ဒါကငါ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ သင်၏အကြောင်းရင်းကိုသိပြီးယင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ သင်၏စိတ်ကိုနားလည်ခြင်းသည်မိမိအတွက်ဖော်ပြသည့်အကြောင်းပြချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင့်ကိုလှည့်စားလိမ့်မည်ကိုနားလည်ခြင်း။ မနက်ဖြန်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့စည်းကမ်းကိုမွေးမြူဖို့ဆိုတာသင့်ရဲ့အလုပ်ပဲ။ အကြောင်းမရှိရင်အလင်းမရှိဘဲမှောင်မိုက်တဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးမင်းလမ်းကိုရှာရတာနဲ့တူလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုလမ်းပြရန်သင်၏အလင်းမရှိဘဲနှင့်သင်မလွှဲမရှောင်ပတ်ပတ်လည်လာလိမ့်မည်ဟုရထားဝင်တိုက်ခံရဖို့ပိုများပါတယ်။ တိုက်တွန်းမှုတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါမင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်ကမထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံသည်မှားယွင်းသောအရာဖြစ်သည် လုံးဝမရှိမဖြစ် သင်ဤသိသော။
"စည်းကမ်းများ၏နာကျင်မှုသည်းခံ, ဒါမှမဟုတ်နောင်တ၏နာကျင်မှုခံစားနေကြရသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်နောင်တတစ်တန်အလေးချိန်စဉ်စည်းကမ်းအောင်စအလေးချိန်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်s ။ " - ဂျင်မ် Rohn
လေ့ကငျြ့ခနျး ငါအားကစားရုံမသွားဘူး ငါတို့ထဲကတချို့ဟာပိုက်ဆံမရှိကြဘူး၊ ငါ့ကိစ္စမှာအနီးအနားမှာတစ်ယောက်မရှိဘူး။ အစားထိုးမှာတော့ငါ Hist (တစ်ပတ်လေးရက်, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသည် (ငါ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုများအတွက်မှတ်ချက်များ၌တည်ရှိ၏) ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုသန်စွမ်းလာဖို့ငါ့မှာအရမ်းသဘာဝကျတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါပျော်တယ်။ အားအင်မရနိုင်ရင်အားလုံးလေ့ကျင့်သင့်တယ်။ သင်အသက်တာ၌ပြုသမျှအရာအားလုံးအတွက် fit နှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိရန်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့်၊ ငါဟာအရင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်။ တချို့ရက်တွေငါမလေ့ကျင့်ချင်ဘူး၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်ခုတည်းသောအိမ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။
10 စာမကျြနှာဖတ်ရန် နေ့စဉ်စာအုပ် ၁၀ မျက်နှာပါဖတ်ပါ။ လွယ်ကူသော peasy ။ ကြီးပြင်းလာတဲ့စာအုပ်ကိုတစ်ခါမှမဖတ်ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆီကလာတာဖြစ်ပြီး၊ ဒီဟာကစာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကိုရရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ စာမျက်နှာ ၁၀ မျက်နှာသည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဆက်ဖြစ်လို၊ မလိုချင်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ခါမျှမသိဖူးသောအရာတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်ရက်ကိုစာမျက်နှာ ၃၀၀၀ ကျော်ကျော်ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း၊ သင်က၎င်းကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းမစီမံထားလျှင်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်သည်သင်ပိုင်ဆိုင်သောအရေးကြီးဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုထက်မြက်စေပါ။ Hone အဲဒါ။ သင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ပန်းပဲသမားသည်မိမိတူကိုပုံသဏ္byာန်တူအောင်ပုံဖော်။ လက်နက်ပုံဖော်သကဲ့သို့၊ သင်၏စိတ်သည်သင်၏လက်နက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတိုးတက်အောင်အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ပြီး၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ။
သည် LIMIT PC ကို USAGE ငါအင်တာနက်ကိုတကယ်ဆိုလိုတဲ့အခါ 'PC' လို့ပြောလိုက်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုမသိဘဲ၊ မင်းမှာအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတောင်ရှိနိုင်တယ်။ သင်မလိုအပ်သောအချိန်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် YouTube တို့ကိုမကြည့်ပါနှင့်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုလုံးရှိတယ်။ ဒီဟာကမင်းအတွက်များများအတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ တစ်နေ့ကို ၂ နာရီအင်တာနက်ကန့်သတ်ထားတယ်။ တခါတရံငါကကပ် - တစ်ခါတစ်ရံငါကျော်သွားလိမ့်မယ်, ဖြစ်ပျက်, ဒါပေမယ့်သူကသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖမ်းရန်သတိရပါ။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင်၌လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမရှိသေးပါက၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးခြင်း (အလွန်အရေးကြီးသည်။ စာနယ်ဇင်းများကကျွန်ုပ်ကိုအကြိမ်များစွာပြန်လည်သက်သာစေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်း) ရနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ အပြင်ဘက်တွင်သင့်နောက်ကျောအိတ်တစ်လုံးနှင့်အတူသာသွားနိုင်သည် အစားအစာ၊ သောက်စရာစာအုပ်ဖြစ်ကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့် ပို၍ သတိရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Mont Blanc ဝန်းကျင်တောအုပ် ၁၁၀ မိုင် - နွေရာသီမှာငါတက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ငါဝက်ဝံအားဖြင့်အသေသတ်ခြင်းကိုမရကြလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
21 FOR BED: 30 (NO ဖုန်း) နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင်အိပ်ရာခင်း။ အီလက်ထရွန်းနစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမရှိသောကြောင့်စောစောစီးစီးထခြင်းအတွက်နှိုးစက်တစ်ခုမှလွဲနိုင်သည်။ အိပ်စက်ခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေး၊ စွမ်းအင်နှင့် ဦး နှောက်စွမ်းအားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤလုံလောက်သောအလေးပေးလို့မရပါ - အစောပိုင်းအိပ်ရာဝင်ရန်သင့်ကိုယ်ကိုစည်းကမ်း! ဒါကို ၁၀ ရက်လောက်စမ်းကြည့်ပါ၊ နင်သက်သာပြီလားစမ်းကြည့်စမ်းပါ၊ ညအချိန်၌အပြာအလင်းဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားနိုးကြားစေသည်သာမက၎င်းသည်သင်၏မျက်လုံးများကိုပိုမိုထိခိုက်စေပြီးသင်၏အိပ်ပျော်နေသောသံသရာကိုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာသဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မျက်နှာသာပေးပြီးအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်နောက်ဆုံးနာရီဝက်ကိုသုံးပါ၊ ဖတ်ပါ၊ ဂျာနယ်…
အစီအစဉ် TOMORROW TODAY ညစဉ်ညတိုင်းလုပ်ရမယ့်နေ့စာရင်းကိုရေးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်နေ့မနက်မှာအိပ်ရာကထပြီးသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာတွေကိုလိုက်နာဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ စာရင်းတို - စာရင်းတို - - 'ထရန် ____' (ငါ့အတွက် ၆း၃၀)၊ ၁၀ မနက်မနက်ခင်းလေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆနျ့ကငျြရနျဆကျ၊ ဒီအလုပ်ကိုငါမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းကနေအရမ်းကျေနပ်တယ်။ ဒီတစ်ခုတည်းကပဲငါ့ကိုပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးလှုံ့ဆော်ခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။
နည်း Talk, နောက်ထပ်နားထောင်ရန် ဤခေါင်းစဉ်ကိုချွတ်ပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ငါမူကားအခြားလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက် NoFap အတွက်ရေရှည်အောင်မြင်မှုဆီသို့ကြီးမားတဲ့ attribute ကိုကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာသာနားထောင်ရန် ပြန်ကြားချက်။ ကျနော်တို့ကိုနားထောင်ရပါမည် နားလည်သည်။ အထူးသဖြင့်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ သင်နောက်တစ်ကြိမ်စကားပြောနေသူကိုသင်မည်သို့နားထောင်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။ သို့သော်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရရန်မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ နားထောင်ပါ။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားသင်လေးစားမှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ပြောသောစကားကိုကြားသည့်အတွက်သင့်ကိုသူတို့လေးစားပါလိမ့်မည်။
တန်ဖိုး ADD အခြားသူများ၏ဘ ၀ နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ချီးမွမ်းတာတောင်မှသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ မင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုတိုးလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သင်၏ဘ ၀ ရှိလူများအားသင်မည်မျှတန်ဖိုးထားနိုင်မည်ကိုအသေးစိတ်စာရင်းပြုစုရန်စဉ်းစားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်မိဘများကိုသင်သူတို့ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပင်ပြောနိုင်သည် - ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ သင်၏ဘ ၀ ကိုတန်ဖိုးထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့မိတ်ဆွေ၊ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီဆိုပါ။
"အောင်မြင်သောသူဖြစ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ယင်းအစားတန်ဖိုးရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ " - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
ကောင်းပြီ, ဒီအပေါ်ဆွဲငင်။ ငါ unapologetic ပေါ့; ဒီမှာအားလုံးကသူတို့ရဲ့အင်အားအရှိဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးထွားလာတာကိုမြင်ချင်တယ်၊ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ငါတို့အချင်းချင်းကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်။ ခိုင်ခံ့သောညီအစ်ကိုများနှင့်နေထိုင်ပါ။ မှတ်ချက်ပေးပါ။
"ဒုက္ခကြုံတွေ့ရသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး: ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏အပြင်းထန်ဆုံးဗားရှင်းအဘယ်သို့ပြုရပါလိမ့်မယ်? "
လင့်ခ် - အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း - တိုးတက်အောင်ကျွန်ုပ်၏လမ်းညွှန်။